ब्लेक | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! ब्लेक | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
एक संसारभरि सबैभन्दा प्ले क्यासिनो खेल, ब्लेक निश्चित आफ्नो समय र पैसा लायक छ. यो स्लट मिसिन मुक्त बोनस वास्तविक पैसा खेल सानो कौशल र रणनीति र अझै पनि आवश्यक जो एक धेरै नै सरल खेल केवल भाग्य नै आधारित छैन. यो क्लासिक खेल व्यावहारिक खेल संचालित संस्करण शानदार ग्राफिक्स को दावा र तपाईं एक समय मा पाँच हात सम्म प्ले गर्न अनुमति दिन्छ.
ब्लेक को विकासकर्ता बारेमा
व्यावहारिक खेल मा संयुक्त राज्य मा स्थापित थिए 2002. कम्पनी डिजाइन, सिर्जना र वितरण भिडियो स्लट को एक किसिम, क्यासिनो खेल, ट्याबहरू पुल, र keno शीर्षक. जो तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याबलेटमा आनन्द उठाउन सक्छौं लागि मोबाइल फोन तिनीहरूले डिजाइन गरेको खेल. यो स्लट मिसिन मुक्त बोनस वास्तविक पैसा खेल पनि व्यावहारिक खेल विकास छ.
खेल यो संस्करण जो नियमित कार्ड को छ डेक संग खेलिन्छ परम्परागत खेल को रेखा मा खेलिन्छ. कार्ड हरेक राउन्ड को सुरु गर्नु अघि shuffled छन्. यो स्लट मिसिन मुक्त बोनस वास्तविक पैसा खेल अनुमति दिन्छ सात मान्छे नै तालिका मा बस्न. खेलाडी, तर, प्रत्येक अन्य विरुद्ध प्ले छैन. सट्टा, खेलाडी को प्रत्येक बिक्रेता विरुद्ध खेल्दै छ. तपाईं यस खेलमा जीत गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं बिक्रेता पराजित गर्न आवश्यक. यो तरिका को एक नम्बर मा गर्न सकिन्छ. तपाईं तर उहाँलाई भन्दा बढी अंक स्कोर भने अन्तर्गत रहन 21 अंक त तपाईं जीत. तपाईं आफ्नो प्रारम्भिक कार्डहरू एक ब्लेक स्कोर भने, त्यसपछि तपाईं जीत. यस बिक्रेता त्यसपछि बस्ट जान्छ भने पनि जीत.
यो स्लट मिसिन मुक्त बोनस वास्तविक पैसा खेल द्वारा प्रस्तावित सट्टेबाजी दायरा विशाल छ. त्यसैले तपाईं एक नौसिखिया वा उच्च रोलर छन् भने पनि, तपाईं अझै पनि खेल पाउनेछन्. तपाईं सम्म खेल्न सक्षम छन्5यो खेल मा एक साथ हात. यो अप गर्न हुनेछ3राम्रो अवलोकनका लागि स्मार्टफोनका हात. तपाईं दृढ अडान विकल्प प्राप्त, हिट, विभाजित, र बीमा र तपाईंले यसलाई बारेमा कार्डहरू व्यवहार गर्नुभयो छन् पछि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ.
निम्नानुसार खेलको मुख्य विशेषताहरु हो:
शर्त दोहोरिने, डबल बेट, पूर्ववत, र खाली सबै बटन खेल चिल्लो कामकाज लागि दिइएको.
यो संस्करण पनि आफ्नो कार्यहरू कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न जाँदैछन् भने अग्रिम तपाईं होस
कार्ड र चिप नियुक्ति एकदम चिल्लो छ.
यो स्लट मिसिन मुक्त बोनस वास्तविक पैसा खेल जो आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याबलेटमा आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ क्लासिक खेल को एक साँच्चै राम्रो संस्करण हो.